Ama-Autoupdates Ahluleka Ku-WordPress? Ukuhluleka kwe-FTP? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 31, i-2010 NgeSonto, Okthoba 30, 2011 Douglas Karr
Muva nje, besineklayenti elilungiselele amaseva alo ukuze lisetshenziswe neWordPress. Lapho okwakamuva Ukuphepha kwe-3.04 buyekeza, kube khona umqondo ophuthumayo wokuthola le nguqulo ifakwe kuwo wonke amaklayenti ethu. Kodwa-ke, leli klayenti elithile belihlala lidinga ukuthi sithuthukise i-WordPress ngesandla… inqubo hhayi eyenhliziyo ebuthaka!
Asizukuthola okujwayelekile “ayikwazi ukubhala amafayela”Iphutha kule bhulogi. Esikhundleni salokho sanikezwa isikrini ngokungena ngemvume kwe-FTP. Inkinga ukuthi besizogcwalisa imininingwane ye-FTP futhi bekuzokwenza usahluleka… Kulokhu kususelwa ebufakazini obuhle!
Ngaxhumana nabangane bethu e-Lifeline Data Centres, e-Indiana isikhungo sedatha esikhulu kunazo zonke, ngoba banama-Apache geeks athile futhi bahlele amaseva abo. Banginikeze isixazululo esilula - ukungeza imininingwane ye-FTP ngqo ngaphakathi kwe- WP-config.php file ku-hardcode imininingwane ye-FTP:
chaza ('FTP_HOST', 'localhost'); chaza ('FTP_USER', 'username'); chaza ('FTP_PASS', 'password');
Ngasizathu simbe, imininingwane efanayo ebingasebenzi efomini, isebenze kahle lapho ifakwa kufayela lokumiswa! Futhi, kwenza i-WordPress isebenze njengoba ibingenza ngaphandle kwesidingo se-FTP…. mane uchofoze isibuyekezo bese uyahamba!
I-Google ne-AMEX Ikhiqiza Amavidiyo Amahhala Amabhizinisi Amancane
Dec 31, 2010 ngo-3: 54 PM
Ngithole amaphutha we-WordPress auto-update ngemuva kokwakha kabusha iseva yami nokuvula ukufakwa okusha kwe-WordPress. Inkinga yami ivele kuFirefox, hhayi i-WordPress - abanye bangabhekana nenkinga efanayo uma igama labo lomsebenzisi le-FTP negama lomsebenzisi le-WordPress lifana nelami (yize lalingunobumba omkhulu namaphasiwedi).
Inkinga ukuthi iFirefox, uma "ukhumbule amaphasiwedi" enikwe amandla, izolungisa ngokuzenzakalela umsebenzisi / ukudlulisa kwifomu kulokho ecabanga ukuthi kufanele kusekelwe kulokho okugcinwe kumphathi we-password. Mina, imininingwane yami ye-WordPress igcinwe, kepha imininingwane yami ye-FTP yayingeyona, njengoba ingasetshenziselwa i-SSH kusayithi. Abantu abakulesi simo bangakhubaza okwesikhashana “khumbula amaphasiwedi” kokuncamelayo / kokukhethwa kukho lapho bezama ukusebenzisa i-WordPress auto-update noma ukufaka ucezu lwekhodi ku-WordPress ukulungisa lokhu kuziphatha.
Jan 1, 2011 ku-4: 23 AM
Ngibe nenkinga efanayo ngokwakhiwa kwe-Apache ekhaya. Kuvele ukuthi kube ngumphumela wezimvume ezingafanelekile nobunikazi kumafayela athile nakwizikhombisi-ndlela ezithile.
Isixhumanisi esingenhla sinikeze ukuqonda kokuthi ungayilungisa kanjani inkinga ngaphandle kokusebenzisa iziqinisekiso ze-ftp. Vele angikukhuthazi ukuthi ushicilele wonke umkhombandlela wakho womsebenzisi uye ku-775 (futhi angizange) kepha lokhu kungiholela endaweni eyiyo.
Jan 3, 2011 ku-7: 21 AM
Kwabanye abafuna izixazululo ezingaba khona: Enye i-blogger ixazulule izinkinga zayo zokuvuselela ngokuzenzakalela ngokuphoqa umphathi wayo ukuthi asebenzise i-php5 ngokungeza okulandelayo kufayela lakhe le-.
I-AddType x-mapp-php5 .php
Jan 5, 2011 ngo-12: 19 PM
Ngiyabonga ngokwabelana ngolwazi, ngihlangabezane nezinkinga ngama-autoupdates kepha okuwukuphela kwesixazululo engisitholile ukukhupha ama-plugins bese uvula i-WordPress futhi ekugcineni ngisebenzise wonke ama-plugins.
Le thiphu ingeyenkinga ehlukile kepha kuhle ukwazi ukuthi ungayixazulula kanjani.
Ukubingelela okuvela eMexico!